(၁၄)နှဈသမီးတူမဖွဈသူကိုသားမယားအကွိမျကွိမျပွုကငျြ့သူ - Alinnpya
July 1, 2020 AlinnPya NEWS 0
အမှုဖွဈမှာ၃၀.၆.၂၀၂ဝရကျနနေံ့နကျ၁ဝနာရီ၂၅မိနဈအခြိနျဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ပုသိမျခရိုငျ၊သာပေါငျးမွို့မရဲစခနျးတှငျဒုရဲမှုးလှိုငျဝငျးစခနျးမှုးတာဝနျထမျးဆောငျနစေဉျဒျေါ…..(၅၀)နှဈ၊ကဘြမျးလုပျ၊….ရှာ၊……အုပျစု၊သာပေါငျးမွို့နယျနသေူက၎င်းငျးသညျလှနျခဲ့သော၉)နှဈခနျ့က(၂၀၁၁)ခုနှဈခနျ့ကမောငျဖွဈသူဦး….၏ဇနီးဖွဈသူကှယျလှနျသှားသောကွောငျ့၎င်းငျးတို့၏ကှယျလှနျသှားသဖွငျ့၎င်းငျး၏သမီးဖွဈသူမ… . (၅)နှဈအရှယျကိုယခုအခြိနျထိသမီးအရငျးကဲ့သို့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျလာခဲ့ကွောငျး၊၂၃.၂.၂၀၂ဝရကျနတှေ့ငျ ရကျနတှေ့ငျမောငျဖွဈသူ…..သညျငပုတောမွို့နယျသို့သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျရာမှဒျေါ…….နှငျ့နောကျအိမျထောငျထူထောငျကာ…….ရှာသို့ပွနျလညျရောကျရှိနထေိုငျခဲ့ကွောငျး၊မောငျဖွဈသူဦး……..ကသူ၏သမီးမ…….ကိုကြှနျတေျာ့နအေိမျတှငျပွနျချေါထားခငျြတယျပွောသဖွငျ့မ……ကို ထညျ့ပေးလိုကျကွောငျး၊မောငျဖွဈသူ……၏နအေိမျတှငျနောကျအိမျထောငျဖွဈသူဒျေါ…….၊ဒျေါ…..၏မိခငျဒျေါသနျးသနျး၊ ဒျေါ……၏မောငျဖွဈသူ သနျးနိုငျလေး(ခ)သနျးနိုငျ၊ ဦး…..၏သား(၃)ယောကျတို့နှငျ့အတူ နထေိုငျခဲ့ကွောငျး
၂၁/၂၂ရကျနမြေ့ားတှငျလညျးတဈကွိမျစီပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျးပွောပွသိရှိရသဖွငျ့တရားလိုကတူမဖွဈသူမ…..(၁၄)နှဈကိုအလိုမတူပဲသားမယားအဖွဈအကွိမျကွိမျပွုကငျြ့သူ)သနျးနိုငျလေး(ခ)သနျးနိုငျ(၃၀)နှဈ၊ကဘြမျးလုပျ၊…..ကြေးရှာ၊သာပေါငျးမွို့နယျနသေူကိုဥပဒအေရအရေးယူပေးရနျတိုငျတနျးခဲ့ရာသာပေါငျးမွို့မရဲစခနျး(ပ) ၂၈၈/၂၀၂၀ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ-၃၇၆ဖွငျ့အမှုရေးဖှငျ့ဆောငျရှကျပွီးအမှုစဈအဖွဈဒုရဲမှူးလှိုငျဝငျးမှလကျခံစဈဆေးကာပွဈမှုကြူးလှနျသူကိုဖမျးဆီးပွီးစဈဆေးနကွေောငျးသိရသညျ။
S.H Online သတငျးထောကျခြုပျ
အမှုဖြစ်မှာ၃၀.၆.၂၀၂၀ရက်နေ့နံနက်၁၀နာရီ၂၅မိနစ်အချိန်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင်၊သာပေါင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်ဒုရဲမှုးလှိုင်ဝင်းစခန်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒေါ်…..(၅၀)နှစ်၊ကျဘမ်းလုပ်၊….ရွာ၊……အုပ်စု၊သာပေါင်းမြို့နယ်နေသူက၎င်းသည်လွန်ခဲ့သော၉)နှစ်ခန့်က(၂၀၁၁)ခုနှစ်ခန့်ကမောင်ဖြစ်သူဦး….၏ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားသောကြောင့်၎င်းတို့၏ကွယ်လွန်သွားသဖြင့်၎င်း၏သမီးဖြစ်သူမ… . (၅)နှစ်အရွယ်ကိုယခုအချိန်ထိသမီးအရင်းကဲ့သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြောင်း၊၂၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့တွင် ရက်နေ့တွင်မောင်ဖြစ်သူ…..သည်ငပုတောမြို့နယ်သို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှဒေါ်…….နှင့်နောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်ကာ…….ရွာသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း၊မောင်ဖြစ်သူဦး……..ကသူ၏သမီးမ…….ကိုကျွန်တော့်နေအိမ်တွင်ပြန်ခေါ်ထားချင်တယ်ပြောသဖြင့်မ……ကို ထည့်ပေးလိုက်ကြောင်း၊မောင်ဖြစ်သူ……၏နေအိမ်တွင်နောက်အိမ်ထောင်ဖြစ်သူဒေါ်…….၊ဒေါ်…..၏မိခင်ဒေါ်သန်းသန်း၊ ဒေါ်……၏မောင်ဖြစ်သူ သန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်၊ ဦး…..၏သား(၃)ယောက်တို့နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း
၂၁/၂၂ရက်နေ့များတွင်လည်းတစ်ကြိမ်စီပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသိရှိရသဖြင့်တရားလိုကတူမဖြစ်သူမ…..(၁၄)နှစ်ကိုအလိုမတူပဲသားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူ)သန်းနိုင်လေး(ခ)သန်းနိုင်(၃၀)နှစ်၊ကျဘမ်းလုပ်၊…..ကျေးရွာ၊သာပေါင်းမြို့နယ်နေသူကိုဥပဒေအရအရေးယူပေးရန်တိုင်တန်းခဲ့ရာသာပေါင်းမြို့မရဲစခန်း(ပ) ၂၈၈/၂၀၂၀ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ-၃၇၆ဖြင့်အမှုရေးဖွင့်ဆောင်ရွက်ပြီးအမှုစစ်အဖြစ်ဒုရဲမှူးလှိုင်ဝင်းမှလက်ခံစစ်ဆေးကာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရသည်။
S.H Online သတင်းထောက်ချုပ်
ကလေးငယျတဈဦး ဘောလုံးကစားနစေဉျ လဲကသြဆေုံး